Ikhabethe elikhulu lezigodo eLeech Lake.. lilala 16+!
I-indlu eyakhiwe ngamapulangwe ephelele ibungazwe ngu-Anthony
3,500+ sq ft log cabin enendawo egcwele w/enendawo yokupheka, ukudla, ukuphumula, ukuqoqana, ukudlala, ukulala, njll. Ichibi le-Leech ngaphesheya komgwaqo!
I-Whipholt Beach ingamamayela angu-1/3 phansi komgwaqo ihlinzeka ngokuqaliswa kwesikebhe / ukufinyelela echibini! I-WiFi, ikhishi eligcwele, izitsha, izinto zikagesi, ama-TV ayisikrini esiyisicaba angu-3 anamakhulu amamuvi + ne-inthanethi! Izitofu zegesi namalahle. Indawo ekahle yokugibela izikebhe, ukudoba, imisebenzi yasendlini nengaphandle! Sicela, awekho amaqembu noma imicimbi.
Isitezi esikhulu sinegumbi lokugezela eligcwele elinebhavu / ishawa kanye negumbi lokuwasha elinewasha nesomisi. Ikhishi elikhulu elinesitofu sikagesi, imicrowave, umshini wokugeza izitsha, inqwaba yezitsha/izitsha, isiqandisi nezinto ezincane ezisebenza ngogesi. 55" i-smart TV enamakhulukhulu ama-DVD azodlalwa endlini yokuphumula kanye ne-wifi! Indawo yomlilo yegesi inikeza imfudumalo emnandi nokuzwakala kwekhabethe. Osofa abasha egumbini lokuphumula, izihlalo zamarocker/zokuhlalisa ama-rocker eziyisithupha kanye novulandi ophumayo oya ngemuva. yekhabhinethi esinomshini wokushisa wegesi namalahle. Kukhona nendawo yokuphuzela utshwala egumbini lokuhlala! Esitezi esiphezulu kunamasofa angu-3 eduze nenye i-smart TV engu-55" kanye negumbi legeyimu elinetafula le-blackjack, itafula le-poker netafula le-foosball. Kukhona futhi i-balcony enhle yokuhamba ebheke umakhelwane kanye nendawo yaseLeech Lake. Igumbi lokugezela eligcwele elineshawa/ubhavu. Igumbi lokulala eliphezulu linemibhede emi-5, ikhabethe eligcwele kanye ne-balcony yokuphuma ngezinyawo. Inqwaba yezingubo zokulala ezitholakalayo ukuthi zisetshenziswe kanye nezihlalo eziningi ezigoqekayo ezitholakalayo ezigcinwe ngaphansi kwezitebhisi ezinkulu zaphansi. Isitezi esingaphansi sithuthukisiwe futhi sinokhaphethi omusha kanye negumbi lokugezela elineshawa yokumisa. Indawo yokudlala enhle kanye namagumbi okulala amabili angasese anemibhede emibili ekamelweni ngalinye. Indawo yokudlala inombhede wokudonsela ngaphandle, imibhede eyibhantshi kanye ne-futon. Kukhona nesiqandisi esiyisipele sokudla neziphuzo ezengeziwe! Kunama-kayak ama-4 atholakalayo ukuze asetshenziswe. Ukupaka kuyatholakala izimoto ezingafika kwezi-5 ngaphambili kanye nendawo ye-trailer yesikebhe noma izimoto ezimbili ngaphezulu ngemuva. Umgodi womlilo egcekeni langaphambili unikeza indlela enhle yokujabulela impilo yasebusuku yasendaweni! Ebusika ikhabethe liyawathatha ama-heater kagesi amaningi ukuze lifudumale. Nginikeze izifudumezi zesikhala eziningi ongazisebenzisa kuyo yonke ikhabethe njengoba uwadinga.
Umbhede omkhulu ongu-1, imibhede eyidabuli engu- 3, 1 umbhede wosana
1 umbhede omkhulu, umbhede oyidabulu engu- 1, 1 umbhede wosana
Umbhede ongu-1, 2 osofa
I-HDTV engu-55" ene- I-Amazon Prime Video, I-Netflix, I-Roku
4.92(109 okushiwo abanye)
4.92 · 109 okushiwo abanye
Umakhelwane unobungane kakhulu futhi kulula ukuhamba. I-Leech Lake ingaphesheya komgwaqo. Kukhona ulwandle lomphakathi kanye nokwethulwa kwesikebhe 1/3 mile phansi komgwaqo.
Ngingumsebenzi wezempi osebenzayo futhi ngihlala eVirginia ngakho ngeke ngikwazi ukuphendula ngokushesha. Uma udinga ukuxhumana nami, zama uTony 719-310-4408 noma umkami uLindsay ku-727-542-3743 noma ungithumele i-imeyili ku-tonyewers@yahoo.com
Ngingumsebenzi wezempi osebenzayo futhi ngihlala eVirginia ngakho ngeke ngikwazi ukuphendula ngokushesha. Uma udinga ukuxhumana nami, zama uTony 719-310-4408 noma umkami uLindsay k…